Izindawo zokuhlala e-Delle Rose - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e-Delle Rose
Bibbiena, Toscana, i-Italy
Ikamelo e-ifulethi ibungazwe ngu-Walter
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Aga 18.
Ifulethi elinamagumbi amabili elisendaweni ethule enhlokodolobha yeCasentino, endaweni emaphakathi, ukuze zibabaze ubunjalo balo, ubuciko nomlando. Emamitha angu-300 ukusuka emgwaqeni wesifundazwe kanye nemizuzu engu-5 ukusuka esikhungweni esingokomlando, i-Lodging of the Roses inendawo yokupaka eyabiwe enkulu futhi elula.
Eduze kakhulu nezitolo ezinkulu, izitolo, imigoqo, amakhemisi, amabhange, isiteshi sesitimela. Eduze: indlela yamabhayisikili nokusetshenziswa kokugijima, ukuhamba ngezinyawo, ukugibela amahhashi, ezemidlalo, ithenisi, amachibi okubhukuda angaphakathi nangaphandle, igalofu, nokuningi.
I-Lodging of the Roses inamakamelo amabili, elinye lawo okuyikamelo lokulala kanye negumbi lokuhlala elinombhede kasofa wesikwele ongu-1 1/2. Igumbi lokuphumula alinalo ikhishi, kodwa lifakwe kuhhavini we-microwave, isiqandisi / minibar, iketela nomshini wekhofi, ukuze unikeze induduzo nokuzimela.
ubusuku obungu-7 e- Bibbiena
Indawo ethule kakhulu futhi eyimfihlo, kungenzeka ukujabulela ubuhle bemvelo beCasentino ngisho nangokuqalaza nokuncoma ubuhle bemvelo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bibbiena namaphethelo